Asalka Afrika ee qalabka casriga ah
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 2, 2017 00: 30 No Comments
Le Goje laga soo bilaabo dalka Nigeria waa aasaaska nooca loo yaqaan 'violin' iyo sida violin, the Goje waxaa lagu ciyaaraa qaanso ... Itoobiya iyo Eritrea, waxaa jira Vièles dhaqameed oo la mid ah isla markaana u ciyaara sida Violin kuwaas oo dhawaaqyada soo saaray ay sidoo kale la mid yihiin.
Falal-dhaqameedyada soo jireenka ah waxay ka yimaadeen Afrika waxaana la isticmaali jiray ilaa xilligii dhagaxa, taas oo ah in la yiraahdo kumanaan sano kahor xilligii loo yaqaan Yurub ee Iftiiminta, ama ka hor intaanay soo saareyaashu noqon hodan iyo caan ayagoo naqshadeeyay violins, Vièles oo horeyba loosoosaaray isla markaana si balaadhan looga isticmaalay qaarada Afrika oo dhan.
Violin waxay u badan tahay inay Europe u timaado Mauritania (Moors) kuwaas oo ku dhex milmay dadkooda iyo dhaqankooda muuqaalka dhulkii hore ee madoowga Yurub.
Banjo waa qalab muusiko oo la soo saaray oo si ballaaran loogu adeegsaday Mauritania qadiimka ah, Sahel iyo xeebta Guinea… ka Moors ka yimid Galbeedka Afrika ama reer Mauritanianka oo laga soo masaafuriyey Yurub ka dibna si khasab ah loogu qaatay Ameerika, ka dibna dib-u-abuuray Banjo, qalabkan muusikada ah West African taas oo aad u la mid ah guitarró Moorish North Africa iyo sida uu qabo Thomas Jefferson ee 1781: Qalabkooda (Addoomada) waa Banjar, oo ay halkan ka keeneen Afrika."
Banjo wuxuu ahaa aaladda si weyn loogu adeegsado heesaha muusiga ee Mareykanka ilaa qalalaasaha 1929, iyo taariikhdaas wixii ka dambeeyay, taariikhyahanadu waxay xusayaan in qoraalladii farxadda lahaa lagu beddelay qoraalladii madoobaa ee Guitar.
Itoobiya, waxaan ka heli karnaa qaababka ugu horeeya ee Guitar halkaasoo loo yaqaano Harp krar, waxaana sidoo kale jira Hindiya Sitar, oo ah mid ka mid ah qaababka hore ee Guitar ... Qoraalka krar ama mid ka mid ah noocyada kala duwan ee dambe horumaray in guitarró, abtirsiiniyaha tooska ah ee Guitar iyada sidoo kale, waxaa si aad ah loogu isticmaali jiray Mauritania qadiimka ah, oo markii dambe loo yaqaan Maghreb, Sahel iyo Guinea.
Le guitarró ayaa lagu soo bandhigay Spain Moors Afrikaanka ku nool 9ème qarnigii kuwaas oo si aad ah ugu adeegsan jiray muusikadooda ka dibna Spain oo dhan, koonfurta Talyaani, koonfurta Faransiiska kuwaas oo iyaduna noqon doona qayb firfircoon oo dhaqanka ka mid ah guitarró Markii Moorsku ka soo dhacay awood, guitarró mar hore waxay noqotay qeyb ka mid ah muusiga Iberian.
Mooska, qaar badan oo ka mid ah ayaa u haajiray in kasta oo ay naftooda u hayaan xagga Rabbiga Ameerika, ayaa la keenay iyaga guitarró , tani waa sababta ugu badan ee loogu ciyaaray gumeystihii Isbaanish, waqti taariikhi ah, halkaas oo ay reer Spanish iyo Boortaqiisigu ka wada guuleysteen oo ay isla wadaageen, dhulalkii Moors horay usoo joogtay Mareykanka.
Laxanka iyo jahwareerka ayaa maanta xukumaa heesaha caanka ah iyo kuwa casriga ah, taa oo leh, qofku kama heli karo Afrikaan ka badan durdurrada iyo laxanka ka-sheekaysiga kuwaas oo ah dhaqan soo jireen ah, oo muddo dheer soo jiifa qalbiga fikradda muusikada. Afrikaan… Batteriga waxaa horay loogu soo rogay dhaqankii millatariga Roman by qeybaha Moorish ee aadka u saameynta badan ee ciidanka Roman, taas oo sameysay aragti wanaagsan in Qalabkaan dhowaan noqon doono dhaqan Milatari oo Caadi ah.
Kuwaas oo markii hore u haajiray ama u qaxay Ameerika ka dib weeraradii Masiixiyiinta, waxay sidoo kale soo bandhigeen dhammaan qalabkoodii Muusikada, oo ay ku jiraan Drums ee Ameerika iyo markii dambe, kuwii maxaabiistii reer Yurub yimid, waxay sidoo kale la yimaadeen hidaha muusikada Moorish, oo ay ku jiraan durdurrada, oo ay Afrikaanka u siiyeen Yurub.
Sidoo kale, Moorska Galbeedka Afrika ee si qasab ah loogu keenay Mareykanka ayaa sidoo kale soo bandhigay Drums iyo sidoo kale Rhythms ka Galbeedka Afrika, Ameerikana nooca Drum wuxuu noqday mid aad u cabsi badan. heerka kuwa wax yeeleeya ayagoo si dhaqso leh u mamnuucaya durbaanada oo dambigooda lagu ciqaabay ciqaab culus inta badan gumeystihii waqooyiga, xitaa haddii taasi aysan ka hor istaagin in laxanka sheekooyinka ay sii socdaan si sir ah ama ahaanshahooda ku qasan qalab kale sida Piano, Banjo, guitarró iyo Fiidkii.
Waxaa badanaa la sheegaa in mar kasta oo dadka madow ay ciyaaraan ama sameeyaan muusig, ay muhiim u tahay qalabka ay adeegsadaan, in ay had iyo jeer keenaan heeso cusub ama duug ah iyo in dhammaantood ay ka mid yihiin laxanka dadka Afrika. Galbeedka ka soo booday Waqtiga iyo Booska oo ugu dambeyntii loogu gudbiyo dhaqamada kale iyada oo loo marayo Notes iyo Miisaaniyada Yurub
Piano ayaa ka yimid kiraarka oo ah qalab muusiko oo Afrikaan ah sida uu sheegay Encyclopadia Britannica 11 duulimaad: asalka ah kiraarka waa mid aad u fog oo waxaa laga heli karaa bari ilaa iyo sidoo kale in aasaaska u ah Kuyunjik à Meecaad-Umeri (Summer) hadda at British Museum © um,
•Barta Baska / Bass Guitar:
Le Gimbri waxaa laga dhisay maqaarka iyo dhuunta dhuunta oo muuqata oo u eg sida gitaarka hore Afrika waana farsamooyinka 'Double Bass artifact' kaas oo ahaa oo ay ku ciyaaraan farcanka Moors wali waxay joogtaa Morocco maanta iyo waliba qayb weyn oo ka mid ah woqooyiga Afrika oo ay Yurub ku soo bandhigeen awowayaashood, halkaasoo qayb ka ahayd dhaqan dhaqameedyada hal-abuurka leh ee ay sameeyeen fannaaniinta Moors iyo meeshii loo yaqaan "Violin Bass".
- Erayga « daf » Ingiriisi iyo ereyga « durbaan » Faransiiska waxaa laga soo qaatay ereyga « Tambari », Drum Hausa.
â € "Goje, abtirsiiyaha Guitar casriga ah wuxuu sidoo kale ahaa aalad loo isticmaalo in lagu heesto halyeeyadii weynaa.
- Awowgii Trump waa « kakaki », (Hausa).
Iyo sidaas oo kale, taasi waa, hadda waad ogtahay sababta, heesaha Galbeedka Afrika ayaa xukumaa dhammaan heesaha casriga maanta!